Fitomboan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ara-tsosialy | Martech Zone
Fitomboan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa sosialy
Alakamisy, Jolay 5, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Rehefa mifampidinika amin'ireo orinasa lehibe maniry ny hiditra anaty media sosialy izahay, ny andiany voalohany apetratsika amin'izy ireo dia momba ny foto-drafitrasan'ny mpanjifa. Raha mijery ny media sosialy ny ekipa mpivarotra mba hanamafisana ny fandefasan-kafatra ataon'izy ireo an-tserasera, manantena kosa ny mpanjifan'ireo orinasa ireo fa haino aman-jery vaovao itakiana valiny.
From Bluewolf: Orinasa misaintsaina mandroso dia mampiasa fitaovana izay tsy fitaovam-piadiana afa-tsy ireo mpiasan'ny serivisy ho an'ny mpanjifany, fa ny mpiasan'izy ireo rehetra, miaraka am-pitadiavana fifaninanana. Midira amin'ny loharanom-pahalalana izay mamaritra antsipirihany ny fifindran'ny birao serivisinao amin'ny rahona, ary ny fampifanarahana azy amin'ny kolontsaina mifantoka amin'ny mpanjifa, dia afaka manampy anao hifaninana sy handresy.
Ity misy infographic tsara iray avy amin'ny Bluewolf izay manome fanazavana momba ny fitomboan'ny indostrian'ny serivisy ho an'ny mpanjifa sosialy:
Ary ity misy topy mijery ny fomba ahafahan'ny Bluewolf manampy ny orinasanao:
Aza hadino ny misintona Kit ny fahombiazan'ny serivisy serivisy an'i Bluewolf!
Tags: bluewolfSerivisy ho an'ny mpanjifaSary torohayserivisy ho an'ny mpanjifa sosialy
Fisondrotan'ny varotra miditra